I-DivvyHQ: Ukucwangciswa kweMixholo ePhakamileyo kunye nokuHamba koMsebenzi | Martech Zone
NgoMgqibelo, Septemba 12, 2015 Douglas Karr
Ukuba usebenza kwinkampani yeshishini, ucwangciso lomxholo kunye nokwenziwa kuphambili kwisicwangciso sakho sokuthengisa. Umceli mngeni kukulawula izimvo, izixhobo, izabelo, kunye nokujonga kwakhona imeko yemveliso iyonke. DivvyHQiqonga libonelela ngazo zonke izixhobo eziyimfuneko ukusuka kwimbono ukuya ekuphunyezweni. Iqonga lenzelwe umxholo kunye nokushicilelwa kwimidiya yoluntu.
I-DivvyHQ sisiseko esisekwe lilifu, ukucwangciswa kokuqulathiweyo kunye nesixhobo sokuhamba komsebenzi esakhelwe ukunceda abathengisi kunye nabavelisi bokuqulatha ukufumana / ukuhlala behlelekile kwaye besenza ngempumelelo amanyathelo okufuna, anzima kunye namanqaku okuthengisa asisiseko. Ukusebenza okungafaniyo kukaDivvy kudibanisa iikhalenda ezisekwe kwiwebhu, ulawulo lomxholo kunye nokusebenzisana kwi-Intanethi ukunceda amaqela omxholo wehlabathi ukuba afake izimvo zomxholo, abele kwaye acwangcise iiprojekthi zomxholo, avelise naluphi na uhlobo lomxholo kwaye ahlale ngaphezulu kwemihla emiselweyo yokuvelisa.
Dashboard -Fumana umfanekiso okhawulezayo wento efanelekileyo, eyenziweyo kunye neqela lakho elisebenza kuyo ngoku.
Iikhalenda ekwabelwana ngazo ngokungenamda -Iikhalenda ezininzi ekwabelwana ngazo njengoko kufuneka ugcine umhlaba wakho kunye neqela lakho kwiphepha elinye.
Ulawulo lokuhamba ngokulula Nokuba ubungakanani beqela lakho, okanye ubunzima benkqubo yakho yemveliso, iDivvy iya kukunceda ufumane umxholo wakho, uvunyiwe kwaye upapashwe ngokufanelekileyo.
Naluphi na uhlobo loMxholo -Uvelisa ngaphezu komxholo wedijithali. Sebenzisa iDivvy ukunceda ekucwangciseni nasekwenzeni naluphi na uhlobo lomxholo ekufuneka ulawule.
Umxholo / Ukupapashwa kweNtlalo -Phelisa iqonga lokutsiba kwaye ngokulula uthumele umxholo wentlalo kunye nemifanekiso ngqo kwi-Facebook, ku-Twitter nakwabanye.
Paka iiMbono zakho eziKhulu -Ngubani owaziyo ukuba zivela nini kwaye zivela phi izimvo zomxholo. Indawo yokupaka yeDivvy ivumela iqela lakho ukuba ligcine izimvo zabo kude kube yintlanganiso yakho elandelayo yokuceba umxholo.
ukhuseleko -Gcina umxholo wakho ukhuselekile ngamanyathelo okhuseleko abekwe yi-DivvyHQ.
Ungazama iDivvyHQ yasimahla nge Bhalisa kwindawo yabo.
tags: ulwabiwo lomxholoikhalenda yomxholoukusebenzisana nomxholoUmxholo UmxholoInkqubo yokuhamba komxholoUkucwangciswa komxholoyfdibya
Iimbono eziphosakeleyo zeNtengiso kunye neNyaniso